पर्यटन क्षेत्रको लगानी जोखिममा- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
पर्यटन क्षेत्रको लगानी जोखिममा
करोडौं खर्चेर थालिएका पूर्वाधार अलपत्र
असार ४, २०७८ विप्लव भट्टराई
इलाम — इलामका डम्बर खड्काले पर्यटकीय स्थल कन्याममा आकर्षक रिसोर्ट बनाउन कस्सिए । ५५ रोपनी जमिन खरिद गरेर उनले होटल, क्यासिनो, सपिङ मल, बुद्धको विशाल मूर्ति स्थापनासहित आकर्षक पार्क र मिनी रेल सञ्चालन गरेर देशविदेशवाट आउने पर्यटकको बसाइलाई लम्ब्याउने उनको लक्ष्य छ ।
इलामको कन्याममा निर्माण रोकिएको रिसोर्ट । करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा थालिएको निर्माण कार्य कोभिड–१९ का कारण रोकिएको छ । तस्बिर : विप्लव/कान्तिपुर
करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा संरचना निर्माण गर्न बैंकहरूसँग मिलेर लगानीको व्यवस्था मिलाइसकेका खड्का कोभिड–१९ कारण अहिले अन्योलमा छन् । ‘अघिल्लो वर्षकै कोभिडले काममा प्रभाव पार्‍यो,’ उनले भने, ‘यो पटक झन् जटिल अवस्था आएपछि त लगानी कसरी गर्नु भन्ने लाग्न थालेको छ ।’ उनले योजनाको डिटेल इस्टिमेट र मास्टर प्लान सबै बनाइसकेका छन् । पूर्वाधारका काम गर्न रड, सिमेन्ट, गिट्टी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्री पनि जम्मा गरिरहेका खड्काले अहिले काम अघि बढाउन भने सकेका छैनन् ।
कन्यामदेखि फिक्कल जाने मेची राजमार्गनजिकै उनले यो संरचना निर्माण थालेका हुन् । भवनका लागि कतिपय घडेरी पनि उनले तयारी गरिसकेका छन् । ‘त्यत्तिकै बसौं अहिलेसम्म गरेको लगानीको चिन्ता, काम अघि बढाऊँ कोभिडको बढ्दो त्रास,’ उनी भन्छन् । मेची राजमार्गसँग जोडिएको क्षेत्र, नजिकैको कन्याम चिया बगान, हिमशृंखलासहित तराईका भूभाग र सीमापारि भारतको मिरिक, दार्जिलिङ र जिल्लाका अनेकन् स्थान देख्न सकिने भूभाग भएकाले सहज अवस्था हुँदा उत्कृष्ट गन्तव्य हुने निष्कर्षमा पुगेर खड्काले यस्तो योजना बनाएका हुन् ।
उनको योजनाअनुसार सबै संरचना निर्माण भएपछि ५ हजार जनाले घुमघामसहितका सुविधा लिने र सयौंले रोजगारी पाउनेछन् । पर्यटनवाट दिगो रूपमा आम्दानी लिँदै रोजगारी सिर्जनामा लागेका यहाँका धेरै उद्यमी कोभिडले दोधारमा छन् ।
लामो समयदेखि इलाम बसपार्कमा घर भाडामा लिएर होटल सञ्चालन गर्दै आएका विजय राईलाई पनि कोभिडका कारण उत्पन्न परिस्थितिले नराम्ररी प्रभावित पारेको छ । करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्चेर उनले आकर्षक सभाहलसहित होटल सञ्चालनमा ल्याउनासाथ दोस्रो लहरको कोभिडको मार खेप्नु पर्‍यो । राम्रो सेवा सुविधा दिँदै कामदारहरूको पनि व्यवस्था गरेर होटलको उद्घाटन गरेलगत्तै बन्द गर्नुपर्दा बैंकको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ । ‘समग्र व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले कृषिलगायत क्षेत्रमा गरेझैं अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो सँगै सहुलियत कर्जा प्रदान गर्दै सरकारले ल्याएको १० दिनको कर्मचारी घुमघाम गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’
अघिल्लो वर्षको लामो सन्नाटापछि गएको दसैंदेखि कन्याम र अन्तुमा पर्यटक आउन सुरु गरेका थिए । बैंकको किस्तासमेत तिर्न हम्मे परेको गुनासो गर्ने व्यवसायीले छोटो समयमा नै राम्रो पुनरागमन गरे पनि दोस्रो लहरको कोरोना महामारीसँगैको निषेधाज्ञाले आवागमन फेरि ठप्प हुँदा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
‘कोसेली घर सब्जी बिक्री गरेरै दैनिक एक लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार हुन्थ्यो,’ कन्यामछेउ हर्कटेकी व्यवसायी हेमु भुजेलले भनिन्, ‘गएको शनिबारदेखि आन्तरिक पर्यटक कम आउन थालेपछि कारोबार ह्वात्तै घटेको छ । पूर्वको पाथीभरादेखि फिक्कल क्षेत्रमा २ सय धेरै कोसेली घर सब्जी पसल छन् । घुमघामका लागि आउने पर्यटकले चिया, छुर्पी, ललिपप, सागसब्जीलगायत खरिद गरेर लैजाने गर्छन् । यसको प्रत्यक्ष फाइदा ग्रामीण क्षेत्रका उद्यमी र कृषकसम्मलाई पुग्ने गरेको छ ।
कन्यामका झन्डै एक सय घोडा व्यवसायी, अन्तुलगायतका दर्जनौं होमस्टे पनि पर्यटक आवागमन न्यून हुँदै जाँदा प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।तर कोरोनाका कारण पर्यटक नै नआउँदा भने सबैलाई समस्या हुने गरेको छ । सूर्योदय उद्योग वाणिज्य महासचिव तथा होटल व्यवसायी महासंघ १ नं. प्रदेशका सहकोषाध्यक्ष राजन प्रधान यही अवस्था रहिरह्यो भने व्यवसायी पलायन हुनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्ष पनि राज्य तहबाट राहत महसुस हुने गरी छुट पाइएन,’ उनले थपे, ‘यो पटक पनि व्यवसायीका लागि ठोस कार्यक्रम नआए पुनः व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनै हम्मे पर्छ ।’
जिल्लामा ४ सय ५० वटा होटल रहेको तथ्यांक छ । यी होटलमा २ हजार ३ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । ‘यही अवस्था रहेमा ठूलो मात्रामा बेरोजगारीको समस्या निम्तिनेछ,’ होटल व्यवसायी संघ इलामका अध्यक्ष देवी पौडेलले भने । जिल्लामा गत वर्ष प्रतिमहिना ७२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको संघको तथ्यांक छ । जिल्लामा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयासम्मको लगानीका २ सय वटा, १० देखि २० लाख रुपैयासम्म लगानीका १ सय ९० वटा र १ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्म लगानीका ६० वटा होटल छन् ।
प्रकाशित : असार ४, २०७८ १२:३२
वेम्बलीमा इंग्ल्यान्ड र स्कटल्यान्डबीच अर्थपूर्ण खेल
असार ४, २०७८ एएफपी
लन्डन — विश्व फुटबलमा सबैभन्दा पुरानो प्रतिद्वन्द्वितामा पर्छ, इंग्ल्यान्डविरुद्ध स्कटल्यान्डको खेल । युरो २०२० को समूह ‘डी’ मा जतिबेला यी दुई टिम मैदान उत्रन्छन्, त्यो प्रतियोगिताकै एक महत्त्वपूर्ण र बहुप्रतीक्षित खेल हुनेछ ।
सेन्ट जर्ज पार्कमा अभ्यासरत इंग्ल्यान्डका खेलाडी । तस्बिर : एपी
यी दुई टिमबीचको प्रतिद्वन्द्विता जति नै पुरानो भए पनि वेम्बलीमा शुक्रबार हुने खेल अझ बढी अर्थपूर्ण रहनेछ । यी दुई टिम सन् १९९६ यता पहिलोपल्ट कुनै ठूलो प्रतियोगितामा भिड्दैछन् । सन् १८७२ मा यी दुई टिम पहिलोपल्ट भिडेका थिए ।
इंग्ल्यान्डले समूहको आफ्नो पहिलो खेलमा क्रोएसियालाई हराएको थियो । यहीं स्कटल्यान्डलाई हराउन सक्छ भने टिमले लगभग नकआउट चरणको यात्रा तय गर्नेछ । त्यसैले इंग्ल्यान्डको रणनीति यही हुनेछ जित । यहाँ प्रश्न के रहेको छ भने स्कटल्यान्डले इंग्ल्यान्डलाई स्तब्ध पार्न सक्छ त ? यदि यस्तो हुन्छ भने स्कटल्यान्डको अगाडि बढ्ने सम्भावना त जीवन्त राख्छ नै । समूहको समीकरण थप रोमाञ्चक हुनेछ ।
क्रोएसियामाथि जित हात पार्नेक्रममा इंग्ल्यान्डले युरोको उद्घाटन खेलमा निकालेको यो नै पहिलो जित थियो । योसँगै इंग्ल्यान्डले आफ्नो अपराजित यात्रालाई सात खेल पुर्‍याएको छ । त्यसैले इंग्ल्यान्ड चाहन्छ यो जितको क्रम जारी रहोस् । स्कटल्यान्डले चेकविरुद्ध बेहोरेको हार पनि धेरै अर्थमा पीडादायी थियो । किनभने उसले खेलमाथि लगभग आफ्नो नियन्त्रण राखेर पनि गुमाउनुपरेको थियो । त्यसैले स्कटल्यान्ड यो हार बिर्सेर इंग्ल्यान्डमाथि जित चाहन्छ ।
सेन्ट पिटर्सबर्ग– स्विडेनको वाचा छ, युरो २०२० मा शुक्रबार स्लोभाकियाको सामना गर्दा बलमाथि बढी नियन्त्रण राखेर खेल्ने छ । भएछ के भन्दा समूह ‘ई’ को आफ्नो पहिलो खेलमा स्विडेनले स्पेनको सामना गर्दा बलमाथिको नियन्त्रण १५ प्रतिशतमात्र थियो । युरो इतिहासमै यति बिर्सनालयक प्रदर्शन कसैको थिएन । स्पेनले जहाँ ९ सय १७ पास खेलेको थियो, त्यहीं स्विडेनले १ सय ६१ पासमात्र खेल्यो । तर यही रणनीतिमा स्विडेनले स्पेनलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्न सफल रह्यो ।
जतिबेला स्विडेन दोस्रो खेलमा उत्रनेछ, टिमले रणनीति फेर्नेछ । एक प्रकारले स्विडेन पहिलो खेलको नतिजामा उत्साही नै छ । तर स्लोभाकिया आफ्नो पहिलो खेललाई लिएर अझ बढी उत्साही छ, किनभने उसले पोल्यान्डलाई स्तब्ध पारेको थियो । यदि स्लोभाकियाले स्विडेनलाई हराउने हो भने नकआउट यात्रा निश्चित हुनसक्छ । त्यसैले स्लोभाकिया जितेको यही स्पष्ट रणनीति लिएर उत्रनेछ ।
क्रोएसियाविरुद्ध चेक गणतन्त्र
ग्लास्गो– युरो २०२० मा कायम रहने हो भने क्रोएसियाले समूह ‘डी’ मा शुक्रबार हुने आफ्नो दोस्रो खेलमा जित निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यसपल्ट उसको प्रतिद्वन्द्वी छ चेक गणतन्त्र । क्रोएसिया इंग्ल्यान्डविरुद्धको खेलमा १–० ले पराजित भएको थियो । तर विश्वकपको उपविजेता टिमका लागि सबै बाटो बन्द भएको भएको छैन । क्रोएसियालाई एउटा तथ्यमा के विश्वास छ भने समूहको अर्को खेलमा इंग्ल्यान्डले स्कटल्यान्डलाई हराउने छ ।
त्यसैले क्रोएसियाले दोस्रो चरण पुग्ने सपना बुन्न छाडेको छैन । चेक गणतन्त्रले अर्को खेलमा स्कटल्यान्डलाई दुई गोलले हराएको थियो, त्यसैले यो टिम लगातार दोस्रो जितको लक्ष्यमा हुनेछ । यो टिमले विश्वास गर्नेछ, इंग्ल्यान्ड अर्को खेलमा विजयी रहनेछ । यही नतिजामा टिकेर चेकले पनि क्रोएसियालाई हराउन सक्छ भने यिनै दुई टिमले नकआउट चरणको यात्रा तय गर्नेछ । जतिबेला दुवै टिम जित्नलाई खेल्नेछ, यस्तो खेल रोमाञ्चक हुन्छ नै ।
प्रकाशित : असार ४, २०७८ १२:२९
विकासले नछोएको लेकाली गाउँ
कोसी अस्पतालमा बिरामीको बेहाल
युवती मृत फेला
किसानका माछा मरेको मर्‍यै